Tsika Yekugeza Maoko | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mixe Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuAustralia Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Nei kugeza maoko yakanga iri nyaya hombe kuvavengi vaJesu?
Iyi ndeimwe yenyaya dzakawanda idzo vavengi vaJesu vaimupomera uyewo dzavaipomera vadzidzi vake. Mutemo waMosesi waiva nemirayiro yakawanda yaitaura nezvekuzvichenesa panyaya dzakaita sekubuda zvinoyerera, maperembudzi, uye mabatirwo aifanira kuitwa zvitunha zvevanhu nezvemhuka. Waitaurawo zvaifanira kuitwa pakuchenesa zvinhu kana kuti vanhu. Izvi zvaigona kuitwa pachishandiswa zvibayiro, kugeza, kana kuti kusasa mvura.—Revh., chitsauko 11-15; Num., chitsauko 19.
Vanarabhi vechiJudha vaitsanangura zvakapfurikidza kanhu kese kaiva mumitemo iyi. Rimwe bhuku rinoti chinhu chese chaiita kuti munhu anzi haana kuchena “chainyatsoongororwa kuti chingazonzi chasvibisa munhu mumamiriro ezvinhu akaita sei, chinosvibisa sei uye kuti chingapararira sei kune vamwe, midziyo ipi uye zvinhu zvipi zvinogona kusvibiswa uye zvisingasvibiswi, uye chekupedzisira, kuti inzira ipi yaifanira kushandiswa pakuzvichenesa netsika dzaifanira kutevedzerwa pakuita izvozvo.”
Vavengi vaJesu vakamubvunza kuti: “Nei vadzidzi vako vasingazvibati maererano netsika yevanhu vomunguva yekare, asi vanodya zvokudya zvavo nemaoko akasviba?” (Mako 7:5) Vakanga vasiri kungotaura nezvekugeza maoko munhu asati adya. Vaiva netsika yekuti munhu anofanira kudirwa mvura mumaoko asati adya. Bhuku ratambotaura pamusoro apa rinotiwo: “Zvinotoongororwawo kuti mudziyo wakaita sei uchashandiswa pakudira, imvura yerudzii inokodzera kushandiswa, ndiani achadira mvura yacho, uye kuti maoko acho anofanira kugezwa nemvura kusvika papi.”
Jesu akaita sei patumitemo twese utwu twainge twagadzirwa nevanhu? Akaudza vatungamiriri vechitendero chechiJudha ivavo kuti: “Isaya akaprofita zvakakodzera pamusoro penyu imi vanyengeri, sokunyorwa kwazvakaitwa kuti, ‘Vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure neni [Jehovha]. Vanoramba vachindinamata pasina, nokuti vanodzidzisa mirayiro yevanhu sedzidziso.’ Munobatisisa tsika yevanhu muchirega murayiro waMwari.”—Mako 7:6-8.
Mibvunzo Inobva Kuvaverengi—August 2016